Madaxweynaha Mali Oo Is-casilay – Great Banaadir
Madaxweynaha Mali Oo Is-casilay
WASHINGTON, D.C. – Madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa xalay saqdi dhexe ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka, kaddibna kala diray baarlamaanka, saacado kaddib marki ay ciidamo ka tirsan millatariga oo fallaagoobay xireen isaga iyo Ra’isulwasaare Boubou Cisse.
Keita oo xirnaa marada afka lagu daboolo daal bandanna uu ka muuqday, ayaa is casilaaddiisa uga dhawaaqay khudbad gaaban oo uu ka jeediyay telafishanka qaranka isaga oo jooa xero millatari oo ku taalla deegaanka Kati oo 15 km u jira magaalada madaxda.
Kacdoon isla xerada Kati ka dhacay sannadki 2012-ki ayaa u xuub-siibtay afganbi ay millatariga ku rideen madaxweynihi hore ee Mali Amadou Toumani Toure.
Faransiiska oo gumeystay Mali iyo dalalka kale ee xiriirka dhaw la leh Mali ayaa ka cabsi qaba, in afganbi lagu sameeyo Keita ay uga sii dari karto colaadda hadda ka oogan Mali.
Midowga Africa iyo Qaraada Midoobay ayaa cambaareeyay xariga ay milatariga u geysteen madaxda dowladda Mali, iyaga oo amray in si deg deg ah xorriyadooda loogu soo celiyo madaxweynne Mali Ibrahim Boubacar Keita iyo Ra’isulwasaare Boubou Cisse. – VOA Somali
Duqa Muqdisho Oo Caddeeyay Sababta Waddooyinka Caasimadda U Xiran Yihiin
Weriye Cabdullaahi Kulmiye Oo Goordhow La Sii Daayay
Deni Oo Kulan La Qaatay Xubnaha Ku Matala Puntland Dowladda Federaalka